Obama oo "sharci siinaya" muhaajiriinta - BBC Somali
Obama oo "sharci siinaya" muhaajiriinta
Image caption Obama ayaa doonaya in muhaajiriinta ay sharci helaan si ay Mareykanka dhaqaale u geliyaan.
Madaxweyne Obama ayaa ka hadlay sida dalka Mareykanka uu wax uga bedelayo hannaanka socdaalka ee dalkaasi.
Waxa uu sheegay inuu qaadi doono tallaabo cudurdaar leh oo si sharci loo siiyo shan milyan oo qof oo soo galooti ah, oo badan kooda ay yihiin waalidiinta dad Mareykan ah iyo kuwa haysto deganaansho joogto ah, kuwaas oo Halkaasi ku noolaa muddo shan sano ah.
Si ay xuquuq u yeeshaan, waxa looga baahan yahay inay canshuur bixiyaan, sidoo kalena aysan weligood dembi galin.
Masaafurinta kuwa badan ayaa iyaduna billaaban doonto.
Khubad xamaasadeysan, ayuu madaxweyne Obama ku sheegay in dalka Mareykanka lagu dhisay dadka muhaajiriinta ah iyo soo galoonti howl-karka ahna uu u baahan yahay in fursad la siiyo.
Hannaanka hadda ayuu doonayaa inuu wax kabadalo Mr Obama, wuxuuna cambaareeyay xisbiga Jamhuuriga, oo xilli dhow si rasmi ah ula wareegaya maamulka labada aqal ee wakiillada ee Mareykanka, waxayna isku deyayaan inay hor istaagaan isbedellada.
Jamhuuriyiinta ayaa ku hanjabay inay aargudan doonaan. Qaar ka mid ah waxa ay sheegeen inay ka bixi doonaan wada shaqeynta meelaha qaar.